Igwe eletriki MS
Ọgwụgwụ Mmiri ọkụ mgbapụta
Aka iji merie nsogbu
N'ihi ụkọ nke akụrụngwa (ọla kọpa, nchara, aluminom, ígwè) maka motọ na ebili nzuzu nke ụgwọ, enyebeghị ụfọdụ iwu ndị ahịa anyị n'oge. N'ihi na ndị ahịa anyị niile bụ ndị ahịa ọkachamara, ha makwaara ahịa ahịa akụrụngwa ugbu a, ha enyela anyị ...
Mmetụta nke ịrị elu akụrụngwa na ụlọ ọrụ moto
Iji bulie ahịa a, ọtụtụ mba na Europe na United States nakweere atụmatụ mkpali akụ na ụba, ego ego dị mfe nyere aka ịrị elu nke ngwongwo a na-ebunye ngwa ahịa. ...
2021 Electric Motor Raw Materials Skyrocketing Ma Market Shock
Ihe ndi bu isi nke onunu na ochicho, onu ogugu nke US dollar na macro liquidity bu isi ihe ato ndi choro ego nke ulo oru mmeputa. Agbanyeghị, ọnụego mgbanwe na nnukwu ego bụcha ngosipụta nke arụmọrụ nke isi. Ya mere, ihe m ...
Ọdịdị nke moto atọ na-enweghị atụ, nke nwere stator, rotor na ngwa ndị ọzọ.
Ọdịdị nke moto atọ na-enweghị atụ, nke nwere stator, rotor na ngwa ndị ọzọ. (1) Stator (anyịnya akụkụ) 1, stator isi Ọrụ: The akụkụ nke magnetik circuit nke moto na nke stator windings na-etinye. Nhazi: stator isi bu ...
Anyị bụ ndị nwere ahụmahụ emeputa nke otu na-adọ Motors, atọ na-adọ Motors na centrifugal nfuli.
Anyị bụ ndị nwere ahụmahụ emeputa nke otu na-adọ Motors, atọ na-adọ Motors na centrifugal pumps.We na-emepụta igba ígwè Motors na nwekwara ike na-emepụta aluminum Motors maka ndị ahịa anyị. isi ihe kpatara ya dika ...
Outda si, Biden na
Na Jenụwarị 19, White House wepụtara vidiyo nke okwu Onye isi ala Donald Trump ka ọ na-ahapụ ọrụ, malite site na ikele ọtụtụ ndị, gụnyere nwunye ya na ụmụ ya nwanyị, osote onye isi ala Pence na ezinụlọ ya, yana White House na ndị ọrụ ya. “Ọchịchị ọhụrụ ga - t ...
Ihe kpatara ọkụ na moto atọ
Isi ihe kpatara igwe eji agba okpukpu atọ na-enweta ọkụ bụ nhọrọ na-ezighi ezi, ojiji ma ọ bụ ndozi. Motfọdụ motọ adịghị mma, nke bụkwa ihe kpatara ọkụ ahụ. Igwe na-agbanwe, fuses na dist ...
Nyocha banyere ọnọdụ dị ugbu a na Development Prospect nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala eletrik nke China na 2020
site ha na 20-12-14
Analysis na nke ugbu a ọnọdụ na Development Prospect nke China si electric moto ụlọ ọrụ na 2020 The moto bụ ike isi iyi nke ụlọ ọrụ. Site na mmekọrịta nke ọkụ eletrik na ndọta, na ntughari ibe n'etiti electric ike na kinetic ike bụ reali ...
Gini mere eji gbuo onye oka nchoputa nuklia nke Iran?
Israel bụ mba dị obere ugbu a na mba Middle East n'ihi na ha nwere ngwa agha nuklia, Israel elelela Iran anya dịka ogwu n'akụkụ ya na nnukwu ihe iyi egwu ya. Ya mere Israel akwụsịbeghị imebi mbọ nke Iran, ọkachasị igbochi Iran ka ọ ghara ịmalite nuklia ngwá agha, ka enr ...
Ihe ndi otu ohuru nke President Joe Biden nke US nwere na ahia ahia nke ndi China
Antony Blinken, Linda Thomas-Greenfield na Jake Sullivan abụrụla ndị isi White House, a na-ahụta ha dịka ndị na-akwado Maazị Biden na ndị isi na-achịkwa amụma mba ofesi ya. Linda Thomas-Greenfield, arụ ọrụ na Africa ọtụtụ afọ na bụ ...
Nyocha Electric Noise
Isi mmalite mkpọtụ nke igwe eletrik bụ mkpọtụ electromagnetic, mkpọtụ igwe na mkpọtụ ikuku. A-rom ụzụ electromagnetic The magnetik ubi mmekọrịta na ikuku ọdịiche nke moto site radial agha na-agbanwe na oge na ohere, nke na-eme ka stator isi na etiti pe ...
Development atụmanya nke elu arụmọrụ moto
Ntughari na nhazighari nke kol, igwuputa ihe, imeputa ihe ndi ozo na ndi oru ndi ozo gha eme ka ndi mmadu choro na mmepe nke ihe ndi ozo.
ZHEJIANG GOGOGO MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, dịka onye nrụpụta nwere ọrụ na sopị nke moto, nfuli mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ ...